Enzụ Mugen Mere $ 352 Million Dollar, Onye edemede mere $ 19,201 - Ndị Ọzọ
Mugen Zụọnụ Movie Mere $ 352 Nde Dollar, E Dere Onye Chepụtara $ 19,201
Onye Ochu Ochu ojo: Mugen Train bu ihe nkiri Anime na ara nke ara nke ara. Karịsịa n'ime obere oge.
N’ime ụbọchị atọ nke emepere ya na ihe nkiri, o mere ihe karịrị nde $ 40.
Na ngụkọta, ihe nkiri ụgbọ oloko Mugen mere $ 352 nde dollar. Na-eme ya nke atọ kachasị ere Anime ihe nkiri niile.
Ma n'okpuru elu foto a adịghị mma dị ka ọ dị.
Koyoharu Gotouge, onye edemede nwanyị na onye edemede nke Demon Slayer nwetara $ 19K naanị na azụmahịa ahụ.
Ọnụ ego iji nwee ekele, ee, mana n'eziokwu ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù nke ego maka ihe ịga nke ọma nke sitere n’aka Demon Slayer.
Karịsịa mgbe ị na-ekwu okwu Ihe ịga nke ọma nke Mugen Train ọ kachasị.
Kedụ ihe kpatara eji kwụọ ụgwọ onye edemede nke Demon Slayer dịtụ obere?
Dị ka kọwara Crunchyroll:
“Sugimoto kọwara na n'ihi na Ndị Mmụọ Ọjọọ: Kimetsu no Yaiba bụ ọrụ mbụ nke Gotouge, a na-ahụ ha dị ka onye edemede ọhụrụ, yabụ ịkwụ ụgwọ maka iji ọrụ maka ikike ihe nkiri nwere ike ịdalata n'ụzọ dị ala.
Iji gbakwunye na nke ahụ, dị ka Sugimoto, Enzụ Mugen naanị kpebiri ịghọ ihe nkiri n'oge mmalite mgbasa ozi nke Ndị Mmụọ Ọjọọ: Kimetsu no Yaiba Usoro anime TV, ihe ama ama nke aha adịghị elu dị ka ọ dị ugbu a.
ihe nkiri kacha mma oge niile
Akụkụ abụọ a pụtara na, ọtụtụ, Sugimoto na-eme atụmatụ ego e nyere Shueisha maka ikike maka akụkọ ahụ bụ naanị 4 nde yen ($ 38,372), naanị 2 nde yen ($ 19,201) na-aga Gotouge ozugbo maka ntọhapụ egwuregwu . ”
Na n'ezie okwu zuru oke na ndị edemede manga na Japan
Ndị edemede Manga na ndị nwebisiinka na Japan anaghị ajụ maka ụgwọ eze.
Usoro e guzobere usoro na-eme ka nke ahụ bụrụ ihe ịma aka, n'ezie. Ma ọ na-eju m anya na ọtụtụ anaghị ejikọ ma chọọ ụgwọ maka ọrụ ha. Ma a na-ewere ha dị ka onye edemede 'ọhụụ' ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ego dị n'ihu na-adị mma, mana ogologo oge ego na-atọ ụtọ ka ọ ka mma ma na-abụ nhọrọ kacha mma.
N'okwu a, Demon Slayer's onye edemede bụ onye edemede ọhụrụ nke mere na nke ahụ so n’ihe mere eji kwụọ ya obere ụgwọ. Ma enwetaghị ọtụtụ ikike.
Ndị ụlọ ọrụ na ajụjụ adịghị njikere itinye ya n ’nsogbu ebe ọ bụ na onye dere akwụkwọ enweghị akara egwu ọ ga-ekwu. Ma nke ahụ ziri ezi.
Mana n'eziokwu, ọ bụkwa n'ihi na onye edemede amaghị ihe ọ bụla nke ọma n'ozuzu ya. Ma ọ bụ na ha achọghị ịkpata nsogbu.
E kwuwerị - ha na-eme ya maka ịhụnanya, ọ bụghị ego ahụ. Ma na ihe na-eri bụ ajụjụ ị ga-ajụ.
Ndị edemede Manga dịka m tụrụ aro na mbụ, kwesịrị iwulite ikpo okwu ha. Givesntanetị na-enye ha mpempe ego ma ọ bụrụ na ha nwere ezigbo manga.
N'ụzọ ahụ, ha nwere ike:
Na-achọ ụgwọ ndị ka elu (ma ọ bụ ụgwọ eze niile ma ọlị).
Kpakorita nkwekọrịta ka mma.
Nweta mmeri kacha mma.
Ma nwee ikike ịchịkwa usoro a.
Inwe ikpo okwu na-enye gị mpempe akwụkwọ, na-eme ka mmadụ niile bịa gị. Inye gi n’ọnọdụ ike.
Nke ahụ bụ echiche m banyere ego ahụ Koyoharu Gotouge a kwụrụ ụgwọ nke ego Mugen ụgbọ oloko nkiri emere na mkpokọta.
Porn Star Lacey London kwuru na ọ na-etinye oge dị ukwuu na-ekiri Anime!
Nwa nwanyi nke Asia nke 16 na-eyi uwe anime anime anwu anoghi na mmiri nke Springfield, Australia
mma kacha mma nke ndụ anime
Anime kacha mma oge niile
boydị ehi bebop bụ naanị nrọ
top 10 kacha mma oge niile